पत्थरीको लागि करेलाको रस कति उपयोगी ? | Himal Times
Home Flash News पत्थरीको लागि करेलाको रस कति उपयोगी ?
पत्थरीको लागि करेलाको रस कति उपयोगी ?
पत्थरीको समस्या भएमा करेलाको रस सेवन गर्नुपर्छ । यसले पत्थरी निकाल्न मद्दत गर्छ । ताजा करेलाको सेवनले पत्थरीको समस्यामा राहत दिन्छ । कानको दुखाइमा करेलाको रस निकालेर ४ थोपा हाल्दा कान दुख्ने समस्या कम हुन्छ ।
Previous articleप्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए के हुन्छ ?
Next articleउकालो लाग्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?